Ngokuthuthukiswa kweThe Times, abakhiqizi abaningi bezimboni bathanda ukuhlomisa imishini yabo namarobhothi ocingweni, bedlala ukuhlukaniswa kokuphepha ukuvikela ukusebenza okujwayelekile kwemishini nokuphepha kwabasebenzi. Kuthiwani nge-aluminium yezimboni kocingo lwenkambiso? Kufanele kube kuhle! Futhi ...
Kungani iphrofayili ye-aluminium ifa - ukuvula inkambiso ngokwengeziwe?
Iphrofayili ye-aluminium yezimboni uhlobo lwe-aluminium alloy extrusion ekhiqizwa yinkambu yezimboni imikhiqizo esetshenzisiwe. Ukwenza ngokwezifiso iphrofayili ye-Aluminium kusho ukuthi ngaphezu kwalabo abangu-20,30,40,50,60,80,90,100,120 nolunye uchungechunge olujwayelekile lwe-aluminium, iphrofayili ye-aluminium alloy nayo ingaba nayo ...
Amaphrofayli e-aluminium enziwe ngokwezifiso adinga ukubhekelwa engcupheni
1. Ngabe kufanele yenziwe ngezifiso ngempela? Uma ufuna ukwenza ngezifiso iphrofayli ye-aluminium yohlaka lwangaphandle lwemishini, kunconywa ukuthi ungenzi ngezifiso, ngoba iphrofayli ejwayelekile yezimboni ze-aluminium iphrofayli yekhwalithi ephezulu ye-aluminium, futhi kunokucaciswa okuningi, ...